Australia ichavhurazve muganho wayo kune vaccinic yakazara vafambi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Australia ichavhurazve muganho wayo kune vaccinic yakazara vafambi
Airlines • nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kudzikama kweAustralia kwezvekurambidzwa kwekufamba kunouya kunyangwe paine maguta makuru maviri, Melbourne neSydney, uye guta rayo guru, Canberra, rakaramba rakakiyiwa nekuda kwekuwedzera kwezviitiko zvakaitika munzvimbo idzi dzemadhorobha kutanga kwegore.
Iko kuzorodzwa kwezvirambidzo zvinobvumidza vagari kuenda kunze kwenyika kana nyika yavo nhomba yekudzivirira yakarova 80%
Parizvino, vanhu vanongokwanisa kubuda kunze kweAustralia nezvikonzero zvakasarudzika, kusanganisira basa rinodiwa kana kushanyira nhengo yemhuri inorwara zvakaipisisa.
Kudzokera kuAustralia parizvino kwakaganhurirwa neyakaomarara mibairo yekusvika uye avo vanodzokera munyika vanofanirwa kuitiswa yekumanikidzwa kwemazuva gumi nemana hotera.
Australia yakatanga yavhara muganho wayo munaKurume wa2020, ichirambidza vagari vayo uye vagari kubva kunze kwenyika vasina mvumo yepamutemo uye vachisiya zviuru zveaAustralia zvakanamatira kunze kwenyika.
Mutungamiri weAustralia, Scott Morrison
"Yenguva yekudzorera vanhu veAustralia hupenyu hwavo," akadaro Prime Minister wenyika, Scott Morrison nhasi, achizivisa izvozvo Ositireriya yaizotanga kurerutsa zvirango zvakakomba zvemuganhu zvayakange yadzika pakutanga kwechirwere cheCOVID-19, ichibvumira vagari vakabaiwa jekiseni kuti vafambe pasi rese.
Kurerutswa kwemiganhu ye COVID-19 yemuganhu ichabvumidza vagari veAustralia kuti vaende kunze kwenyika kana dziviriro yenyika yavo yarova 80% - chinangwa chakatemerwa nyika yese kuona kuti kubuda kwehutachiona hakungakure nzvimbo dzekurapa.
pari New South Wales ndiyo nyika yepedyo kusvika pachikumbaridzo ichocho, ichigadzwa kuti isvike mumavhiki mashoma, nepo Victoria achitarisirwa kuve wechipiri kuzadzisa chinodiwa.
Panguva ino, vanhu vanokwanisa chete kufamba kubva Ositireriya nekuda kwezvikonzero zvakasarudzika, zvinosanganisira basa rinodiwa kana kushanyira nhengo yemhuri inorwara zvakaipisisa. Kudzokera kuAustralia kunorambidzwa nekwakamanikidza kusvika kweanosvika uye avo vanodzokera munyika vanofanirwa kuita yekumanikidzwa kwemazuva gumi nemana hotera.
Morrison akataurawo kuti, pamwe nekuita kuti zvive nyore kuti vanhu vakabayiwa majekiseni vafambe, chiyero chekupatsanura hotera - icho chinodhura AUS $ 3,000 ($ 2,100) - ichakuvadzwa nekutsiviwa nemazuva manomwe pamba voga.
Iko kuzorora hakuzoshanda pakarepo kune vanhu vanobva kunze kwenyika vakapinda mukati, kunyange hazvo hurumende yakati iri kushanda kuona kuti nyika ingango "gamuchira vashanyi kudzoka kumahombekombe edu"
OsitireriyaKuzorora kwakasarudzika kwekurambidzwa kwekufamba kunouya kunyangwe paine maguta makuru maviri, Melbourne neSydney, uye guta rayo guru, Canberra, rakasara rakakiyiwa nekuda kwekuwedzera kwezviitiko zvakaitika munzvimbo idzi dzemadhorobha kutanga kwegore.
Ndege yekurwira yeBritish RAF F-35 yarovera mu ...
Famba Mberi Zuva Rokutanga: Artificial intelligence ndeyechokwadi
Moroko inorambidza zvese UK, Germany, neNetherlands nendege ...
New Texas Chicken Joint Ichiita Yakakura muCambodia
Iyo Bahamas ikozvino yave Nyika yakachengeteka yeAmerica ...
Yekutanga-yekutanga-nyika dzakawanda, yakawanda-vabatanidzi Tourism ...
2 Nzira Itsva dzeKubika Nguruve: Inonaka uye Hunyoro
Paris Gare du Nord chiteshi chechitima chabviswa pamusoro pebhomba ...
Vashanyi veGerman Zvino Vagadzirira Mafashamo Jamaica
Bartlett muhurukuro neEmirates Airlines Kusuma...
VeLondon vanogadzirira kutungamira kudzoreredza rwendo rwekuzorora gore rinouya
Tourism kuGlasgow Declaration pamusoro peKuchinja Kwemamiriro ekunze...
Kingston Jamaica Iye zvino pane Rondedzero ye2022 Yepamusoro Zororo ...
Matanhatu kubva mumaguta gumi akanakisa epasirese ekutamisa ...
Anguilla Zvitsva Zvitsva paKufamba Kwekupinda Protocol Kutanga...
Kisimusi paBiltmore House Zvino Vhura
Nzira yekushanyira Cambodia zvakare?
Qatar Airways yekutanga ndege kujoina IATA CO2NNECT...
Slovakia ichangoburwa EU nyika yekuraira kuvharika kwe ...
Tweeting ikodzero yemunhu - zvakare muNigeria
FAA inomanikidza Verizon uye AT&T kumisa yakazara 5G ...
Expo 2020: Emirates Airlines kuenda kuSeychelles
New York kuenda kuMadeira. Ndege Yekutanga-Yese Yakananga
WOW! BMW 8 Series Gran Coupe Yakakosha Edition
IMEX America Inovhura muLas Vegas ine Great Excitement
Destination Mekong mutsva wekuvhura shamwari yeGlasgow...
Mushumo mutsva weWorld Tourism Barometer kubva kune Imwe Nyika? November 28, 2021
Mushure mehafu yekutanga isina kusimba ya2021, kushanya kwenyika dzakawanda kwakawedzera zvakare mumwaka wechirimo weNorth Hemisphere, zvichiwedzera mhedzisiro muchikamu chechitatu chegore, kunyanya muEurope.
Canada Gurukota rezvehutano Nechimbichimbi Chirevo pamusoro peKupararira kutsva kweCCIDID Variant Omicron November 28, 2021
Gurukota rezvehutano reCanada Vanoremekedzwa Jean-Yves Duclos vakaita chiziviso chakakosha pakupararira kweiyo COVID Omicron mutsauko muCanada.
Waini - Chenin Blanc Yambiro: Kubva kuYummy kuenda kuYucky November 28, 2021
Chenin Blanc muzambiringa usina hanya. Sei? Nekuti zvinonetsa kupfuura Chardonnay kana Sauvignon Blanc kukura nekuita waini. Mazambiringa anoda musanganiswa wakakwana wevhu uye mamiriro ekunze, uye zvinonetsa kuti mugadziri wewaini aenzanise oak uye dzimwe sarudzo dzinowedzera kunaka.